Banyere Anyị - Xinneng Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Tọrọ ntọala ihe karịrị afọ 10 gara aga Esineng mepụtara otu igwe nrụpụta dị elu dị elu na-efu ọnụ nke mara aha ya ma weta ya n'ụwa niile.
Companylọ ọrụ ahụ bụ onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke obere na nke ọkara nke oghere fotovoltaic nke anyanwụ. Ọ dịwo anya ọ na-ebupụ azụmaahịa site na ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi. Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịmepụta azụmahịa azụmahịa nke mba ọzọ n'adabereghị. Ndị nwe ya hụrụ oghere n'ahịa maka ngwa ọrụ na-ewe ike dị elu iji jikọta ya na anyanwụ iji belata ọnụ ahịa ịgba ọsọ maka ndị ahịa ma rụọkwa ọrụ dị mkpa iji belata okpomoku zuru ụwa ọnụ.
Banye na nwanne ha nwanyị ụlọ ọrụ na-ahụ maka friji, ha malitere imepụta sistemụ anyanwụ / friji nke na-eji 100% nke ike anyanwụ arụ ọrụ na usoro nhazi dị iche iche. Na mgbakwunye iji nye egwuregwu zuru oke maka uru nke ike ọhụrụ, ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya n'ọhịa ikuku. , ma gbalịsie ike ịmepụta usoro nchekwa, nchekwa ngwaahịa na gburugburu ebe obibi. Nke a esetịpụla ọkwa ọhụrụ na teknụzụ maka nhọrọ ume ọkụ.
Anyị nwekwara sistemụ nlekota ime ụlọ oyi, nke nwere ike nyochaa ọnọdụ ezigbo oge nke ime ụlọ oyi na ekwentị mkpanaaka, gụnyere ọnọdụ okpomọkụ, ọnụọgụ nke ngwongwo, ma ọnụ ụzọ emechiri, wdg, wee nwee mkpu. iji chọpụta nsogbu dị na nchekwa oyi ozugbo enwere ike iji belata mfu.
N'otu oge nke mmepụta na ahịa, ụlọ ọrụ na-a attentiona ntị na nkà na ụzụ ọhụrụ, na-enye ndị ọrụ na ngụkọta ngwọta nke anyanwụ na friji usoro, na-enye ndị ahịa na a n'ezie arụmọrụ, gh, mma na a pụrụ ịdabere na friji usoro nwere ọgụgụ isi management n'elu ikpo okwu. Iguzosi ike n'ezi ihe, uru ọ bụla na ihe ọhụrụ na-aga n'ihu bụ ụkpụrụ bụ isi nke ụlọ ọrụ anyị.
Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ pere mpe na nke pere mpe na-ahụ maka ịmepụta oghere foto foto.
Ka ọ dị ugbu a, anyị na-enye ngwọta friji maka obere ụlọ na oyi na-ajụ. Anyị nwere sistemu igwe na ntanetị iji họrọ site na ntanetị ma nyekwa ike dị iche iche nke ike anyanwụ dịka mpaghara dị iche iche na mba dị iche iche si dị. Igwe friji nke anyanwụ dị ezigbo mma maka mpaghara na-enweghị ọkụ eletrik ma ọ bụ ọkụ eletrik dị oke ọnụ. Igwe ihe ngbachapụ DC zuru ezu nwere ike ịchekwa 30% -50% ike karịa nkeji oge na-edozi ngwa ngwa. Ihe na-erughị afọ 3, ego echekwara nwere ike ịzụta igwe ọzọ ahụ.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ guzobere ogologo oge gara aga, ọtụtụ ndị ọrụ na otu ụlọ ọrụ ahụ amatala ya. Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nke ịnabata otuto dị ka ntọala, ịbụ onye nwere ezi obi, yana iji ụkpụrụ omume mezuo ihe. Ọ na-achịkwa uru nke ngwa nju oyi na East China ma na-enye ọrụ dị elu na nkwa ọnụahịa maka ụlọ ọrụ ụlọ na nke ndị mba ọzọ na mpaghara Yangtze Delta Delta.
Na oge niile, ụlọ ọrụ anyị nwere ngwaahịa dị elu na ọrụ echebara echiche, meriri otuto nke imirikiti ndị ọrụ. All tinyere, anyị ụlọ ọrụ-agbaso ụkpụrụ nke ime ihe n'eziokwu, aha mbụ na àgwà mbụ, na-eje ozi ọhụrụ na ndị agadi ahịa obi dum.
Anyị na-atụ anya ịkwalite ibe anyị, zụlite ọnụ ma mepụta ọdịnihu dị mma site na ezi mmekọrịta na mmekọrịta enyi.